८७ हजार श्रमिक फर्किएपछि रोकियो चार्टर्ड उडान – Rapti Khabar
८७ हजार श्रमिक फर्किएपछि रोकियो चार्टर्ड उडान
उजिर कार्की/नेपालखबर/काठमाडौं, असोज १४
सरकारले बिहीबारदेखि नियमित उडान थप गरेको छ। विदेशबाट अलपत्र श्रमिकलाई ल्याउन उडान थप गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार बिहीबारदेखि नियमित उडान थप भएका छन्। विमान कम्पनीहरुले मागेजति नै उडान स्वीकृत गरिएको क्षेत्रीले बताए। प्राधिकरणले अक्टोबर १ देखि २४ तारिखसम्मका लागि नियमित उडानको तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
२४ दिनमा नेपालका लागि १४ विमान कम्पनीले ९९ वटा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नेछन्।
नेपाल एयरलाइन्सले सातामा हङकङबाट दुई वटा, दोहाबाट सातवटा, क्वालालाम्पुरबाट छ वटा, दुबईबाट सात वटा, नारिताबाट दुई वटा र ग्वान्जाउबाट एउटा उडान गर्ने छ।
हिमालयन एयरलाइन्सले दोहा र आबुधावीबाट हरेक साता ७–७ वटा उडान भर्ने छ। फ्लाई दुबई र हिमालयन एयरलाइन्सले यी तीनवटै ठाउँबाट हरेक दिन उडान गर्नेछन्। यसैगरी हिमालयनले क्वालालाम्पुरबाट साताको पाँच दिन पाँचवटा उडान भर्ने भएको छ।
उसले चीनको चङकिङबाट साताको एउटा उडान गर्ने छ। फ्लाई दुबईले दुबईबाट साताको सातवटा उडान भर्नेछ।
कुवेतबाट जजिरा एयरलाइन्सले साताको सातवटा उडान भर्ने छ। कोरियन एयरले सोलबाट साताको चार दिन चारवटा उडान, एयर अरेबियाले शारजहाँबाट साताको सात वटा उडान भर्ने छ।
एयर चाइना हरेक शनिबार चीनको छेङ्दुबाट र चाइना साउदर्न शुक्रबार गोन्जाउबाट नेपाल आउने छ। मलेसियन एयरलाइन्सले क्वालालाम्पुरबाट साताको चार दिन, मालिन्दो एयरले क्वालालाम्पुरबाट साताको ६ दिन सातवटा उडान गर्ने छ।
कतार एयरवेजले सातामा दोहाबाट सातवटा, सलाम एयरले मस्कटबाट पाँचवटा र टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट तीनवटा उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक भएको छ।
नियमित उडानको संख्या थप गरेसँगै सरकारले चार्टड उडान बन्द गरेको छ। मेडिकल सामग्री बाहेकका लागि चार्टर्ड उडान अनुमति नदिइने सरकारको निर्देशन रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।
सरकारले विदेशबाट चाटर्ड उडानबाट श्रमिकको उद्धार गर्न सुरु गरेपछि करिब ८७ हजार श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्। ३२ देशबाट चार्टर्ड उडान मार्फत नेपाली फर्किएका हुन्।
फर्किनेमध्ये धेरैजसो युएई, कतार, मलेसिया र साउदीबाट रहेका छन्। कतारबाट यो अवधिमा ५२ वटा उडान भएका छन्। तर बिहीबारबाट नियमित उडान मात्रै हुने दूतावासले प्रस्ट पारिसकेको छ।
दूतावासले चार्टर्ड उडानमा सहजीकरण गर्ने विमानस्थलका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई बुधबार धन्यवाद दिएको छ। अक्टोवर १, २०२० बाट नेपाल एअरलाईन्स, हिमालय एअरलाइन्स र कतार एअरवेजको नियमित दैनिक १÷१ ओटा व्यवसायिक उडान हुने भएकोले अब सीधै ती बिमानसेवाका आधिकारिक ट्राभल एजेन्सी मार्फत टिकट खरिद गरी यात्रा गर्न सकिने दूतावासले जानकारी गराएको छ। नेपालखबरबाट साभार
नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई दिल निशानीको प्रश्न: यूट्युबरहरू पत्रकार हैनन् र ?
पछिल्लो समय यूट्युबका सामग्रीहरूसँग केही नाम चलेका पत्रकार असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ– यूट्युबरहरूले पत्रकारिताको बदनाम गरे । पत्रकारहरू मात्र हैन केही कलाकारहरू, नाट्यकर्मीहरू, रंगकर्मीहरू पनि यूट्युबरहरूसँग त्यति खुशी छैनन् । केही समयअघि मात्रै आफ्नो चलचित्रको रंगभेदी समीक्षा गरेको भन्दै मिलन चाम्स नाम गरेका एकजना निर्देशकले प्रनेश नाम गरेका एकजना यूट्युबरलाई प्रहरी हिरासतको […]
शंकर दाहाल छोराछोरीसँग अदिबहादुर गुरूङ।छोराछोरीसँग अदिबहादुर गुरूङ। श्रीमान् परदेशमा बिचल्ली परेका सात महिना अनु गुरूङका लागि सात वर्षभन्दा लामाजस्ता भए।। मरूभूमिमा रियाल कमाउन गएका उनका श्रीमान्बारे खबर आउँथ्यो-कम्पनीले तलब दिन बन्द गर्‍यो रे, एक छाकमात्र खान दिन्छ रे। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुई वर्षअघि कतार पुगेका अदिबहादुर गुरूङ ठगिए। चर्को गर्मीमा ज्यामीको काम। न तलब पाए, […]
आज २०७७ असोज १५ गते विहीबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
इजरायलसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, अब कुन-कुन क्षेत्रमा जान पाइन्छ इजरायल ? हेर्नुस